Domain and Hosting ဆိုတာဘာလဲ? - Zeagwat, Inc.
Domain and Hosting ဆိုတာဘာလဲ?
စာဖတ်သူကမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကို Online ပေါ်သို့ချဲ့ထွင်ဖို့အတွက် Website တစ်ခုစတင်တော့မည်ဆိုလျှင် သင့် Website ကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ အတွက် သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ Website များရေးဆွဲရာတွင်သိထားရမည့်အချက်ကတော့ Domain နှင့် Hosting ဆိုတာဘာလဲ…ဆိုတာပါပဲ?
Domain ဆိုတာ အရှင်းဆုံးပုံစံ ‌ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိ website ရဲ့လိပ်စာ နံပါတ် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- Hosting ကအိမ်ဆိုပါဆို့ Domain ကအဲ့အိမ်ရဲ့ အိမ်လိပ်စာနံပါတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်…..
Hosting ဆိုတဲ့အိမ်ကို user တွေရှာတွေ့ ဖို့ဆိုရင် Domain ဆိုတဲ့အိမ်နံပါတ်ကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့ အိမ်တစ်အိမ်ကိုသွားမည်ဆိုလျှင် အိမ်လိပ်စာကို မသိဘဲသွားရောက်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး….. ထိုနည်းအတူ Website တစ်ခုကို Domain name မသိပဲရှာြကည့်ဖို့ဆိုတာလည်း မလွယ်ကူလှပါဘူး.နော်……
( ဥပမာ – www.zeagwat.com ) zeagwat ဆိုတဲ့ name က domain nameပဲဖြစ်ပါသည်…. နောက်က .com ဆိုတာကတော့ TLDs (Top Level Domain) လို့ခေါ်ပါတယ်။ .com, .net, .org, .info, .travel အစရှိတဲ့ TLDs အမျိုးစားပေါင်း လက်ရှိအချိန်တွင် ၂၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့်မိမိရဲ့ Website အတွက် Domain တစ်ခုဆိုတာ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။
Domain name ကိုမိမိရဲ့ Business နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ unique name ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ် …..
ရှိပြီးသား Domain name ကိုတော့နာမည်တူလိုက် ၀ယ်လို့မရပါဘူး….၀ယ်ယူလိုလျှင် ပိုင်ရှင်ထံမှသာ ၀ယ်ယူလို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ( ဥပမာ- google.com နဲ့ facebook.com …အစရှိတဲ့ Domain name တွေ လိုမျိုးပေါ့ )
ပုံမှန်အားဖြင့် Domain name တွေကတော့ .com , .net , .org , .info စသည်တွေကတော့ နိုင်ငံတစ်ကာ အသုံးပြုတဲ့ Domain Name Extension တွေပါပဲ……
နောက်က Domain name ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကိုယ်စားပြု လည်းဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။ ( ဥပမာ- ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းကို ရည်ရွယ်ချင်တဲ့ Website တွေက‌တော့ .us(United State) , .com.mm (Myanmar), .sg (Singapore), etc… စသည်တို့ဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်… )
Domain Name System (DNS) ဆိုတာဘာလဲ?
DNS ဆိုတာ Internet မှာရှိတဲ့ domain name ( eg : www.facebook.com) တွေကို ကျွန်တော်တို့ အလွယ်တကူ ခေါ်သုံးလို့ရအောင် Internet Protocol (IP) တွေကတစ်ဆင့် သုံးလို့ရအောင် IP to Domain Name Translate လုပ်ပေးတဲ့ service ဖြစ်ပါတယ်…..
လွယ်လွယ်ပြောရရင် Website တွေကို IP နံပါတ်တွေနဲ့မခေါ်ပဲ နာမည်တစ်ခုအနေနဲ့ ခေါ်နိုင်အောင်အဓိကလုပ်ပေးတာက DNS ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- www.google.com လို့ခေါ်လို့မရတော့ပဲ သူ့ရဲ့ IP address (8.8.8.8)ကိုခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်….
ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Online ပေါ်ကနေရှာချင်တဲ့ Website တွေခေါ်တဲ့အခါ DNS က သတ်မှတ်ထားတဲ့ Domain အား Locate လုပ်ပေးတဲ့အတွက် Website တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူ ရှာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Website တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် Webpage တွေကိုထားရှိဖို့ Hosting လိုအပ်ပါတယ်။ Webpage ဆိုတာ internet စာမျက်နှာတစ်ခုပါပဲ။ Hosting ကိုပြောမယ်ဆိုရင် Web Server အကြောင်းလဲ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Web Server ဆိုတာ Domain နဲ့ Hosting တွေနဲ့ Webpage တွေ သူ့ဟာနဲ့သူ အလုပ်လုပ်ဖို့ စီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ Computer Server ပဲဖြစ်ပါတယ်……. ( ဥပမာ – ကျွန်တော်တို့ Browser ကနေ တစ်ဆင့်ခေါ်ြကည့်တဲ့ Webpage တွေကို Webserver ကထုတ်ပေးတာပါ )
Hosting ဆိုတာ Webserver ပေါ်မှာ Website အချက်လက်တွေကို သိုလှောင်ထားတဲ့ နေရာတစ်ခုပါပဲ။
Webserver တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ပြီး Website ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် ကုန်ကျစရိတ်များမည် ဖြစ်ပါသည်…. အသင့်ဆောက်ပြီး Webserver က Hosting ကိုဌားရမ်း သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ website ပေါ်မှာထားတဲ့ data အခြေနေပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ Hosting ရဲ့ Storage ကိုငှားရမ်းရွေးချယ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်…..
Website တစ်ခုအတွက် Domain နှင့် Hosting နှစ်ခုလုံးရှိမှဖြစ်မှာပါ….
Hosting ရှိပြီး Domain မရှိလျှင်လည်း Website တစ်ခုဟာ Online ပေါ်မှာအလုပ် လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ……
ကျွန်တော်တို့ Zeagwat မှလုံခြုံစိတ်ချရသော အ‌ရည်သွေးမြင့် Service ကောင်းမွန်သော Hosting များနှင့် Domain များကို စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာြဖင့် ရောင်းချ၀န်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။